जनयुद्ध दिवस : फागुन १, बिम्ब अनेक !
समय सबैभन्दा बलवान मानिन्छ । यसपालिको जाडो हट्यो । घामले पोल्न थाल्यो । चुनावमा घाम रोज्ने जनता दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पाएर पनि निराश हुन थालेका छन् । मंसिरको शुरूमै मदर मूनको होली वाइन खाएर नेकपाको नेतृत्व थलियो । पुसमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले आ–आफ्ना अधिवेशनमा चौपट रडाको मच्चाए । पुस २७ बारे बुद्धिजीवीहरूले प्रशस्त लेखे ।
पूर्वराजाको पक्षमा ‘जनमत’ जस्तो देखिँदा बुढा राजाप्रति बुद्धिजीवीहरू सकरात्मक बने । विस्तारवादी भन्नेहरूले राष्ट्रनिर्माता भने । कीर्तिपुरेका नाक काटिएको कुरालाई विदेशीको हल्ला बताइयो, जबकि अनेक स्वदेशी इतिहासकारले त्यो तीतो सत्यलाई स्वीकारेका छन् । बालचन्द्र शर्मा लेख्छन्, ‘समस्त कीर्तिपुरेका नाक र ओठ काटियो । कीर्तिपुरका प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई प्राणदण्ड दिइयो । पृथ्वीनारायण शाहको यस जघन्य कामको ढाकछोप गर्नु व्यर्थ छ । (‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा’ पृष्ठ : १८०) ।’
इतिहासमा शङ्खमणि रानालाई पृथ्वीनारायण शाहको आदेशमा छाला काडेर मारिएको उल्लेख छ । वर्तमानमा जनताका छाला काड्न नेता, बुद्धिजीवी, व्यापारी, कर्मचारी सबै उद्यत् छन् । सबै ‘दिवस’ मा राज्यको रस खानेहरू उट्पट्याङ्को राजनीति गर्छन् । यस्तै–यस्तै देखेर मुक्ति बन्धु लेख्छन्, ‘कांग्रेसीहरू भ्रष्टाचारमा पाकेका हुन्छन्, फत्केका हुन्छन् । उनीहरू आलोचना पचाउन पनि सक्छन् ।
नेकपा नामका सत्तासीनहरू संस्कृति र क्रियाकलापमा कांग्रेसकै पाइला पच्छ्याउँछन्, तर आलोचना सहन सक्दैनन् ।’ डा. गोविन्द केसीको अनशन, कांग्रेसको आन्दोलन र नेकपा अध्यक्षको वक्तव्यले पनि ठूलै तरङ्ग चलेको छ । यस्तै बेला फागुन १, अनेक बिम्ब बोकेर टुप्लुकिएको छ ।
२०५२ देखि २०६२ सम्मका प्रतिदिनका घटना वर्णनातीत छन् । धनजनको त्यो क्षतिको लेखाजोखा हुनै सक्दैन । मुलुकमा सकरात्मक परिर्वतन आउला भनेर जनताले सहेका थिए । बाह्र वर्षको यो अन्तरालमा जनतालाई झनै निराश पारिँदैछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मुलुक यो विधि निराशाको चरणमा कहिल्यै थिएन । इतिहासको आलो घाउ हेर्दा दुईवटा प्रतिनिधि घटना बढी उल्लेख्य छ–
१) दोरम्बा काण्ड – २०६० साल साउन ३२ गते सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच तेस्रो चरणको वार्ता दाङको हापुरेमा गर्ने तयारी भइरहेका बेला शाही सेनाद्वारा रामेछापको दोरम्बामा २१ जना निहत्थाहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि गोली हानी हत्या गरियो । खाल्डोमा पुरिएका, हात पछाडि बाँधिएका लासको विभत्सता देखेर अनेक पत्रकारहरू विक्षिप्त जस्तै बनेका थिए । ‘मानवता विरुद्धको महाअपराध !’ सबै अधिकारकर्मीहरूले भनेका थिए ।
२) बाँदरमुडे काण्ड– चितवनको बाँदरमुडेमा माओवादीद्वारा बिच्छ्याइएको माइनमा परी सर्वसाधारण चढेको बस विस्फोट भएको थियो । ३८ जना जनसाधारण र ३ प्रहरीले कहालीलाग्दो मृत्युवरण गरेका थिए । अझै अपाङ्गहरू रोइरहेकै छन् ।
समयले घाउमा खाटा बस्छ, तर स्मृति मनको खाटा हो । चरम यातना भोगेका पीडितहरूको स्मृतिबाट त्यो दुर्दान्त पीडा कहिल्यै हट्दैन । यसका लागि तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही दुवैले दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने हो । त्यतिखेरको सत्तापक्ष र विद्रोही दुवै यतिखेरका सत्तापक्ष हुन् । घाइते, बेपत्ता र शहीद परिवार आँसुको ढिका पिउँदै बाँच्न वा बिदेसिन बाध्य छन् । सत्ताका कमरेडहरूले पोहोर ‘जनयुद्ध दिवस’ लगभग बिर्सेका थिए ।
सत्ताबाहिरका माओवादीहरूले त्यो दिवसलाई अलि महत्त्व दिए । २३औं जनयुद्ध दिवस समारोहमा महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले ‘नयाँ ढंगले बन्दुक उठाउँछौं’ भनेका थिए । पार्टीको मुखपत्र ‘वर्गदृष्टि’ मा ती भनाईहरू ब्यानर न्यूजको रूपमा छापिएका छन् । काममा चाहिँ अहिलेका विद्रोहीको पनि छाँटकाँट गतिलो देखिँदैन ।
फागुन ०१ कथाको कृष्ण जस्तै छ, जुन दृष्टिले हेर्‍यो उस्तै देखिन्छ । फागुन एक : बिम्ब अनेक छन् ।
नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘२० औं शताब्दीका राजनीतिक दलहरू पूँजीवादी र साम्यवादी वैचारिक विमर्शमा आधारित थिए । उदाहरणका लागि नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट । अब उनीहरूको युग करीब–करीब पूरा भएको छ !’
प्याच्च भन्नुपर्दा त स्वयं डाक्टर साहेबकै युग पो करीब–करीब पूरा भएको पाइँदैछ । चीनको चपेटामा परेर शिथिल बन्दै गएको भारत अझै नेपालमा बफादार सहयोगी खोज्दैछ । २ नंं. प्रदेशलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नमै केन्द्रित छ ।
अब प्रचण्डको भूमिकाले देशलाई कस्तो दिशा निर्देश गर्ला ? कम्युनिस्ट पार्टी, कार्यकर्ता र तमाम कम्युनिस्ट मतदाताहरूमा प्रचण्डप्रति फेरि एकपल्ट प्रचण्ड जिज्ञासा जगाएको छ । कूटनीतिज्ञहरू प्रचण्डप्रति आबेगले खनिएका छन् । प्रचण्डकै सल्लाहकार हैसियतका रमेशनाथ पाण्डे प्रवृत्तिले पुरानै पञ्च प्रवृत्ति देखाइसके । पूर्व एमालेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे खुलेर विरोधमा ओर्लिए ।
अमेरिकाका पिछलग्गुहरू प्रचण्डले बर्बाद गरेको त्रास फैलाउँदै कुर्लिएका छन् । ठीक यही बेला २४औँ जनयुद्ध दिवसको तिथि टुप्लुकिएको छ । पूर्व माओवादी कार्यकर्ता फेसबुकमा क्रान्तिकारी गीत राखेर रमाउँदै छन् । कतिपय ठाउँमा पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरूले साझा भाव पनि देखाउलान् । चिया खाइदेलान्, टीका लाइदेलान् । तर नेपाली कांग्रेसले ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’लाई टाँसे जस्तो पुतलीको खेलले जनयुद्ध दिवस मनाइनुको कुनै अर्थ छैन । नेकपा सरकारको अलमल र स्थानीय तहको चरम भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दै गर्दा जनयुद्धलाई नेपाल ध्वस्त पार्ने डिजाइन भन्नेहरू जोडतोडले चिच्याइरहेका छन् । नेकपा समाप्तै भैसक्यो राजा आइसके भनिरहेका छन् । अब के होला त ?
कमरेड प्रचण्डको अमेरिकी हेपाहा नीतिको विरोध–वक्तव्य सिद्धान्ततः सही छ । व्यवहारमा पनि यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ । एउटा दादाले सादालाई पिट्दा दादाको चाकरी गर्नेहरू दास हुन् । दादासँग तत्काल लड्न जान नसकिए पनि मनवचनले सादालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । फिल्ममा भिलेनले हिरोइनलाई बलत्कार गर्न थाल्दा युवा दर्शकहरू हिरोको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न थाल्छन् । जब हिरो आउँछ, ताली, सुसेली र सिटी बजाइन्छ । त्यै हो न्याय चेत, त्यही हो क्रान्ति चेत । त्यही क्रान्ति चेतलाई सिद्धान्त र संगठनले अगाडि बढाउँछ र ठूल्ठूला परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
दश वर्षको बलिदानीले क्रान्तिफल खोजेको छ । अब त्यसले आकार ग्रहण गर्नैपर्छ । नेपाललाई रणमैदान बनाएर चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति सफल हुँदा हाम्रो अस्तित्व रहँदैन । यसबारे कसैले बोल्नै पथ्र्यो । नेकपाका अध्यक्षले बोले । विश्वमै एउटा सनसनी फैलियो ।
चुनावताका केपी ओलीले जनतालाई हँसाइ–हँसाइ भोट मागे । जनताले भोट दिए । नभुलौँ, त्यसको अन्तर्यमा जनयुद्ध थियो । जनताले एमालेको सङ्गठन र माओवादीको क्रान्तिकारी नीतिलाई भोट दिएका हुन् । अब प्रचण्ड र केपी ओलीलाई जुधाउन जनताका शत्रुहरूले न्वारनदेखिको बल झिक्छन्, झिक्दैछन् । यही युद्ध हो, जनयुद्ध यही हो । फागुन ०१ कथाको कृष्ण जस्तै छ, जुन दृष्टिले हेर्‍यो उस्तै देखिन्छ । फागुन एक : बिम्ब अनेक छन् ।